Mihoatra ny 100 tapitrisa ny isan’ny marary.Karazana aretina mitaiza inona izany?|Micomme
Andro iraisam-pirenena ho an'ny COPD ny 18 Novambra 2020.Andao hanokatra ny misterin'ny COPD ary hianatra ny fomba hisorohana sy hitsaboana azy.
Amin'izao fotoana izao, mihoatra ny 100 tapitrisa ny isan'ny marary voan'ny aretin'ny havokavoka (COPD) any Sina.Ny COPD dia miafina lalina, matetika miaraka amin'ny kohaka mitaiza sy ny phlegm maharitra.Araho tsikelikely miseho tratra sy sempotra, mivoaka hividy sakafo na miakatra tohatra vitsivitsy fotsiny dia ho sempotra.Tena voa mafy ny fiainan'ny marary, sady mitondra enta-mavesatra ho an'ny fianakaviana ihany koa.
PkantoI: Inona no atao hoe COPD?
Tsy toy ny fiakaran'ny tosidrà sy ny diabeta, ny aretin'ny havokavoka obstructive mitaiza (COPD) dia tsy aretina tokana, fa teny ankapobeny izay mamaritra ny aretin'ny havokavoka mitaiza izay mametra ny fikorianan'ny rivotra ao amin'ny havokavoka.Ny fihanaky ny aretina entin'ny rivotra, anisan'izany ny setroka sigara, no mahatonga ny aretina.Miaraka amin'ny tahan'ny fahasembanana sy ny fahafatesan'ny olona, ​​​​dia lasa fahatelo fahatelo amin'ny fahafatesana any Shina izany.
Fizarana II: Miisa 86 ny marary COPD isaky ny olona 1000 mihoatra ny 20 taona
Araka ny fanadihadiana, ny fihanaky ny COPD amin'ny olon-dehibe 20 taona no ho miakatra any Shina dia 8,6%, ary ny fihanaky ny COPD dia mifandray tsara amin'ny taona.Ny fihanaky ny COPD dia somary ambany kokoa amin'ny taona 20-39 taona.Aorian'ny faha-40 taonany dia mitombo ny fihanaky ny aretina
Fizarana III: Mihoatra ny 40 taona, misy olona 1 amin'ny 10 voan'ny COPD
Araka ny fanadihadiana, ny fihanaky ny COPD amin'ny olon-dehibe 40 taona no ho miakatra any Shina dia 13,7%;Mihoatra ny 27% ny tahan'ny fihanaky ny olona 60 taona mahery.Arakaraka ny taonany no avo kokoa ny fihanaky ny COPD.Nandritra izany fotoana izany, ny tahan'ny fihanaky ny aretina dia ambony kokoa noho ny vehivavy.Ao amin'ny sokajin-taona 40 taona no ho miakatra, ny tahan'ny fihanaky ny aretina dia 19,0% amin'ny lehilahy ary 8,1% amin'ny vehivavy, izay avo 2,35 heny amin'ny lehilahy noho ny vehivavy.
Fizarana IV: Iza no atahorana kokoa, ahoana ny fisorohana sy fitsaboana azy?
1. Iza no mora voan'ny COPD?
Ny olona mifoka sigara dia mora voan'ny COPD.Ankoatra izany, ny olona izay nandany fotoana ela niasa tany amin'ny toerana setroka na feno vovoka, izay voan'ny fifohana sigara, ary voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana matetika amin'ny zaza dia tena atahorana koa.
2. Ahoana ny fisorohana sy fitsaboana azy?
Ny COPD dia tsy azo sitranina tanteraka, tsy misy fanafody manokana, ka tokony handinika tsara ny fisorohana izany.Ny fisorohana ny fifohana sigara no fisorohana sy fitsaboana mahomby indrindra.Mandritra izany fotoana izany, ny marary COPD dia azo tsaboina amin'ny ventilator mba hanatsarana ny kalitaon'ny rivotra, hampihenana ny fitehirizana gazy karbonika ary hifehy ny fivoaran'ny aretina.
Vokatra mafana, Sitemap Machine Manadio Cpap, Ventilator tsy invasive, Ventilation tsy invasive amin'ny ankizy, Fitaovam-pitaterana tsy misy rivotra, Ventilator Online, Fitaovana sy fitaovana hôpitaly,